Dzosa iyo yekare Instagram icon neichi hunyengeri IPhone nhau
Hazvigoneki kuti parizvino hauna kuziva nezvazvo kushamisika kukuru uko Instagram kwaunza pasi payo ruoko svondo rino. Sezvatakakuudza pano, yakapararira kwazvo kutora mifananidzo pasocial network yanhasi yapa shanduko huru kumufananidzo wayo, ichibvisa kamwechete uye zvachose icon yechinyakare yataichemera nayo kudenga nguva dzese dzatichichiona pachiratidziro chemumba medu.
Nekudaro, uye kunyangwe iri shanduko yanga ichida uye yakamirira kweanopfuura makore maviri, havasi vese vaifarira iyi icon nyowani. Kutaura chokwadi, zvinoita sekunge zviyero zviri kutsvedza zvakanyanya kudivi revanoedza. Zvinowanzoitika nguva zhinji kuti zvimwe zvirongwa izvo vanhu vanga vatove nekudzidziswa mukati zvakatyorwa.
Nekudaro, shamwari isingadi yeiyo nyowani Instagram icon, kubva Redmon Pie vanotinyevera izvozvo Pane mhinduro kuitira kuti maziso ako asafanira kuramba uchicherekedza iyo amalgam yemavara nguva dzese dzaunoda kuisa kunyorera. Uye kwete chete kuti mhinduro iyi iriko, asi zvakare iri nyore kwazvo uye pasina chikonzero chekuve neJailbreak.
Yakananga kune iyo poindi. Kuti shanduko iyi itange kushanda unongofanira kuvhura pane iyo iPhone Iyi link. Mushure meizvozvo, uye sezvo peji rinovhura iro roga richitiudza, tinofanirwa kudzvanya sarudzo yekugovana inoonekwa mubhawa repasi uye, pakarepo mushure, chikamu "Wedzera kuchiratidziro chemumba". Dzvanya pa "Wedzera" uye BOOM, tinayo. Iye zvino isu tinongofanirwa kuratidza mubhokisi rebhokisi rinovhura kana uchipinda munzira pfupi, uye ndizvozvo. Tinogona kutonakidzwa Nhau dzeedu nyowani Instagram dzakavharidzirwa nechiratidzo cheiyo yekare, kugona kutumira iyo nyowani kune folda, semuenzaniso, kuiviga kubva pakuonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Ungachinja sei ikozvino Instagram icon yeiyo yekare isina Jailbreak
Icho chinongedzo hachisi
Ndatenda, inoshanda kwazvo kwandiri uye inotaridzika kuva yakanaka kwazvo! Kutenda izvo zvandinozvishandisa pane ino peji ivo vakanyanya kunaka!
Ndatenda nematauriro enyu 😉
Michelangelo Nr akadaro
Ndatenda kwazvo, ndichigara ndiri peji ine mhinduro dzakanakisa uye nhau!
Pindura Miguel Ángel Nr
Isu tinofara kuti zvaibatsira kwauri 😀
Hapana chinobuda, ndichave ne instagram uye ndizvozvo.
Efren Jumbo akadaro
Zvakanakisa, kana uine matambudziko vhura iyo muS Safari zvakananga
Pindura kuna Efrén Jumbo
Cojonudo. Ndatenda kwazvo nehunyengeri. Iyo icon nyowani yakasvika pandiri tsinga.
Iwe haugone ... Ingoisa chinongedzo uye unovhura sarudzo yekuvhura instagram, uye hairege iwe uchiwedzera icho seyakananga kuwana ... Izvo hazvishande.
Pindura kuna Wal